Ebi Anodya rufu: Fans vanobhadhara mutero wepamoyo senge mukurumbira wezvehutano anokonzeresa anofa neleukemia - Pop-Tsika
Ebi Anodya rufu: Fans vanobhadhara mutero wepamoyo senge mukurumbira wezvehutano anokonzeresa anofa neleukemia
Zvemagariro enhau anokurudzira Ebi Eats, aka muvambi weNurseLifeRN, akashaya muna Chikunguru 22nd mushure mekurwa neleukemia. Ebiowei Porbeni akatanga iyo Peji ye Instagram kuti ape rumbonera rwekushanda mune zvehutano, aigara achitumira memes uye zvinosetsa nyaya nezvekushanda semukoti. Iyo peji raishandiswawo senge chikuva chekutora vanamukoti uye yakavambwa mu2017.
Iyo Instagram peji ine vanopfuura mamirioni 1,2 vateveri, izvo zvino zvaenda zvakavanzika. Ebi Eats zvakare aive neakaundi account pa Instagram, iyo yave kubviswa.
Makadhi akatanga kudururira paTwitter kune mukoti anofara.
Mumwe fan akati:
kana akanyenga kamwe achabiridzira zvakare
Moyo wangu wakaremerwa. Ndatenda @ebi_eats nekugadzira inoshamisa nharaunda yekuchengetedza ne @nurselifern. Mazwi haakwanise kutsanangura kundibata kwawakaita pandiri, uye anenge mumwe mukoti wandinoziva. Nyaya dzako dzakandiburitsa covid. Nyika yarasikirwa inoshamisa mumiriri uye shamwari.
Ini ndangoverenga nhau kuti Ebi ( @nurselifern ) yakapfuura neChipiri. Pane gomba mudumbu mangu. Kuziva kuti mumwe munhu anga aine simba rakadai kunharaunda yevanamukoti haasisiri nesu kuri kuita moyo kupwanya. Ndinokutendai nezvose, Ebi. Rudo & kumbundira kumhuri yako
- Sammy (@sammydaviesRN) Chikunguru 22, 2021
Ndinokutendai nezvose zvamakaita kune vanamukoti. @ebi_eats @nurselifern
kuziva sei kuti musikana anondida
- Emily (@em_el_eee) Chikunguru 22, 2021
Ebi kubva kuna nurselifern ndiye ainyanya kukoshesa mukoti. Kupfuura kwake kurasikirwa kukuru kunharaunda yevanamukoti 🥺
- Alice 🇳🇬✨ (@Au_Golden_) Chikunguru 22, 2021
Zvinoshamisa kuchema mumwe munhu wandisati ndambosangana naye, asi Ebi ( @nurselifern ) anga asiri mutorwa kune chero wedu. Peji rake rakandiita kuti ndinzwe kuonekwa mune basa risina kugara riine musana wangu. Pandakasiya IG memes dzake dzaive dzichiri pakati pevakawanda concos neRN shamwari. Haazombokanganwiki
- Nikita (@kitagarr) Chikunguru 22, 2021
Takarasikirwa nemumwe akavimbisa gomarara. RIP kuuropi kumashure @nurselifern Chirwere chinotyisa! Hosha inotyisa kwazvo !! Zorora Murunyararo Ebi
- Damilola (@missdamie) Chikunguru 22, 2021
Ndine sooooo fkn ndakasuruvara. Ebi akashaya. Wtf. Zvakafanana nekurasa waunoshanda naye. Akatisimudzira nemweya wekunakidza panguva yakaoma kudai. Zorora murunyararo nurselifern
- Feefofum (@ FRob1889) Chikunguru 22, 2021
Vanamukoti vazhinji vaunoziva vari kuchema kurasikirwa kwe @ebi_eats . Kuchema even typing iyoyo. Aive mukoti kumashure @nurselifern , iyo OG mukoti meme peji paGI iyo inowana yakawanda manesi kuburikidza shit mashifts. Hirari, inodzokororwa, uye chaiye. Takarasa shamwari. Kusuwa iwe Ebi. #fuckcancer pic.twitter.com/BdrnMLVXzb
wwe gehena muchitokisi 2016 matikiti
- Simmer (@bella_sim) Chikunguru 22, 2021
Ebi akafa kubva kuna MukotiLifeRN
- brocoRN (@squirebrocoRN) Chikunguru 22, 2021
Urwu sei kunyange hupenyu chaihwo izvozvi? Ndine shungu kwazvo pamusoro pekurasikirwa naEbi. nurselifern akaunza nharaunda yedu rufaro rukuru nekusetsa. Aive munhu anoshamisa.
- nicunurselifee (@nicunurselifee) Chikunguru 22, 2021
Uyezve Verenga: 'Ndakamutumira mameseji zvisati zvaitika': Kid Maury anobhadhara mutero wepamoyo kushamwari uye TikTok nyeredzi Swavy, akafira mukupfura
Ndiani Ebi Anodya?
Ebiowei Porbeni aive mukurumbira wehutano hwekukurudzira uyo akaenda ku Instagram ne Twitter, achigovana anecdotes nezve hupenyu hwamukoti nenzira inosetsa. Akazvarwa muNigeria asi akatamira kuChicago aine makore mapfumbamwe. Ebi akadzidza paYunivhesiti yeCalifornia, Los Angeles, kuti ave mukoti weICU.
Mufananidzo ne Instagram
Kunze kwekumhanyisa fan-inofarira Instagram account, Ebi Eats zvakare aive nepodcast yake, Mukoti Taura, kwaakataura nezve hupenyu hwake achishanda semukoti.
Iyo pesvedzero akavhura nezvekurwira kwake nekenza pa Instagram munaGunyana 2019. Akanga ati-
matthew perry uye courteney cox
Ndine chokwadi chekuti vamwe venyu makazviona kuti ndakanyangarika pasina nguva svondo rapfuura. Ndakanga ndisati ndave nekunzwa izvo zvakanaka kwenguva. Zvinoonekwa yaive leukemia.
Ebi Eats anga atangawo GoFundMe kutsvaga mari yemubhadharo wake.
Zvinosuruvarisa, akashaya risingasviki gore, achirwisa leukemia. Mutungamiri wezvemagariro evanhu Emily, akaenda ku Instagram kunogovana nhau idzi:
Nemwoyo unorema tinosuruvara kugovera Ebi akashaya Chipiri masikati akapoteredzwa nemhuri uye neshamwari. Chinhu chimwe chete chatinoziva hunhu hwakanaka hwenharaunda @nurselifern yakave nehupenyu hwake. Mhuri yake inokumbira kuti isu tiremekedze kuvanzika kwake.
Mhuri yeEbi Eats yakanga isati yaburitsa chero chirevo chepamutemo panguva yekunyora chinyorwa ichi.
kudzorera murume wako sei mushure mekunge akusiya kune mumwe mukadzi
nzira yekukumbira yechipiri mukana muhukama
zvekuita kana abva
misoro inonakidza yekutaura nezvayo neshamwari
sei kusave unonamira musikana
zvinhu zvekutaura nezveshamwari pamusoro pekutumira mameseji
unoziva kuti une zuva rakaipa riinhi